ZayYarHlaing: Magic ISO
ကျွန်တော်တို. ဟိုးအရင်က Rar တို. Zip တို.နဲ. ကျုံ.လိုက်ရင် တော်တော်ကျုံသွားပြီလို. ထင်နေကြတာ။ Magic ISO ကသနားတာပေါ့ဗျာ။ အဲဒီတော့ နောက်ဆိုရင် ဆော့ဝဲ အကြီးတွေကို ကျွန်တော်က Magic ISO နဲ. ချုံ.ပြီးပေးလိုက်မယ်။ ခင်ဗျားတို.က ကိုယ့်ဘာသာဖြည်ပြီး ပြန်သုံးနိုင်အောင်
ဒီ Magic ISO လေးကို
0 comments: to “ Magic ISO ”